Bit By Bit - မေးမေးခွန်းတွေကို - 3.2 စောင့်ကြည့်နှိုင်းယှဉ်မေး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြုအမူများ ပို. ပို. ထိုကဲ့သို့သောအစိုးရနှင့်စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဒေတာအဖြစ်ကြီးမားသောဒေတာသတင်းရင်းမြစ်အတွက်ဖမ်းဆီးရမိကြောင်းပေးထား, လူအခြို့မေးခွန်းများကိုမေးမြန်းခြင်းအတိတ်ကအရာဖြစ်၏ထင်ပေလိမ့်မည်။ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုရိုးရှင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ ငါသုတေသီများကလူမေးခွန်းများကိုမေးရန်ကိုဆက်လက်ဦးမည်ထင်နှစ်ခုအဓိကအကြောင်းရင်းများရှိနေပါသည်။ ကျွန်မအခန်း2မှာဆှေးနှေးအဖြစ်ပထမဦးဆုံးသည်, တိကျမှန်ကန်မှု, ပြည့်စုံ, များပြားကြီးမားတဲ့ data တွေကိုသတင်းရင်းမြစ်၏အသုံးပြုနိုင်စွမ်းနှင့်အတူစစ်မှန်သောပြဿနာတွေရှိပါတယ်။ အမူအကျင့်ဒေတာ-ပင်ပြီးပြည့်စုံသောအမူအကျင့်ဒေတာကနေသင်ယူဖို့အလွန်ခက်ခဲကြောင်းအရာအခြို့ရှိပါတယ်: ဒုတိယအအဲဒီလက်တွေ့ကျတဲ့အကြောင်းရင်းများအပြင်ပိုပြီးအခြေခံကျအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အရေးအပါဆုံးလူမှုရေးရလဒ်များနှင့်ခန့်မှန်းအချို့ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ခံစားမှု, အသိပညာ, မျှော်မှန်းချက်များနှင့်ထင်မြင်ချက်များအဖြစ်ပြည်တွင်းရေးပြည်နယ်များဖြစ်ကြသည်။ internal ပြည်နယ်များကလူရဲ့ဦးခေါင်းအတွင်း၌တည်ရှိခြင်း, တခါတရံတွင်ပြည်တွင်းရေးပြည်နယ်များအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကိုမေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
ကြီးမားတဲ့ data တွေကိုသတင်းရင်းမြစ်များ၏လက်တွေ့နှင့်အခြေခံန့်အသတ်နှင့်မည်ကဲ့သို့သူတို့စစ်တမ်းများနှင့်အတူကျော်လွှားနိုင်ပြီး Moira Burke ကနဲ့ Robert Kraut ရဲ့အားဖြင့်သရုပ်ဖော်ကြသည် (2014) မိတ်၏ခွန်အား Facebook ပေါ်မှာအပြန်အလှန်အားဖြင့်ထိခိုက်ခဲ့ပုံပေါ်သုတေသန။ သူမအစဉ်အဆက်ဖန်တီးလူ့အပြုအမူများအများဆုံးကြီးမားခြင်းနှင့်အသေးစိတ်မှတ်တမ်းများတဦးတည်းမှပြည့်စုံလက်လှမ်းခဲ့ဒါထိုအချိန်တွင် Burke က Facebook ကိုမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒါပေမယ့်, ထိုနည်းတူ Burke ကနှင့် Kraut သူတို့ရဲ့သုတေသနပြုမေးခွန်းကိုဖြေနိုင်ရန်အတွက်စစ်တမ်းများသုံးစွဲဖို့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်အကြားရငျးနှီးမှု၏အကျိုးစီးပွား-The ပုဂ္ဂလဒိဋ္ခံစားချက်၏ရလဒ်ကိုနှင့်သူမ၏သာတုံ့ပြန်ရဲ့ဦးခေါင်းအတွင်း၌တည်ရှိသည့်ပြည်တွင်းရေးပြည်နယ်မိတျဆှေ-ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ပြင်အကျိုးစီးပွားကသူတို့ရလဒ်ကိုစုဆောင်းရန်စစ်တမ်းတစ်ခုသုံးပြီးအပြင်, Burke ကနှင့် Kraut လည်းအလားအလာဖွငျ့အချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးလေ့လာသင်ယူရန်စစ်တမ်းတစ်ခုကိုသုံးရန်ခဲ့ရသည်။ အထူးသဖြင့်သူတို့ကအခြားလမ်းကြောင်းများ (ဥပမာ, အီးမေးလ်, ဖုန်းနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်) မှတဆင့်ဆက်သွယ်ရေးကနေ Facebook ပေါ်မှာဆက်သွယ်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခွဲထုတ်ချင်တယ်။ အီးမေးလ်နှင့်ဖုန်းကတဆင့်အပြန်အလှန်အလိုအလျှောက်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်သော်လည်းသူတို့တစ်တွေစစ်တမ်းသူတို့နှင့်အတူစုဆောင်းခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်အဲဒီခြေရာတွေ Burke ကနှင့် Kraut မှမရရှိနိုင်ကြဘူး။ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိနှင့် Facebook ကို log ကိုဒေတာနှင့်အတူ Non-Facebook မှာအပြန်အလှန်အကြောင်းကိုသူတို့ရဲ့စစ်တမ်း data တွေကိုပေါင်းစပ်ပြီး, Burke ကနှင့် Kraut Facebook ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ရေးရငျးနှီးမှု၏တိုးမြှင့်ခံစားခကျြတကယ်တော့ခဲခဲ့ကြောင်းသုံးသပ်ခဲ့သည်။
Burke ကနှင့် Kraut ၏လုပျငနျးသရုပ်ဖော်အဖြစ်, ကြီးမားတဲ့ data တွေကိုသတင်းရင်းမြစ်ကလူမေးခွန်းများမေးရန်လိုအပ်ကြောင်းဖယ်ရှားပစ်မည်မဟုတ်။ ကျွန်မဤအခန်းတစ်လျှောက်လုံးကိုပြသပါလိမ့်မယ်အဖြစ်ကြီးမားသောဒေတာသတင်းရင်းမြစ်အမှန်တကယ်, မေးခွန်းတွေမေး၏တန်ဖိုးတိုးမြှင့်နိုင်သည်တကယ်တော့ငါကဒီလေ့လာမှုကနေဆန့်ကျင်ဘက်သင်ခန်းစာဆွဲလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်, မေးမြန်းခြင်းများနှင့်စောင့်ကြည့်အကြားဆက်ဆံရေးကိုစဉ်းစားဖို့အကောင်းဆုံးလမ်းကိုသူတို့ဖြည့်မယ့်အစားအစားထိုးဖြစ်ကြောင်းရှိ၏ သူတို့မြေပဲထောပတ်နှင့်ဂျယ်လီကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ ပိုပြီးမြေပဲထောပတ်လည်းမရှိတဲ့အခါ, လူတွေကိုပိုပြီးဂျယ်လီလိုခငျြ; ပိုပြီးကြီးမားတဲ့ data တွေကိုလည်းမရှိအခါ, ငါကလူကိုပိုပြီးစစ်တမ်းများချင်ကြလိမ့်မည်ထင်ပါတယ်။